ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » စျေးဝယ် » မှာစျေးဝယ် - ဘယ်မှာအခြားရှိသနည်း Dead Sea Mall!
Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • ဂျော်ဒန် Breaking News • သတင်း • စျေးဝယ် • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • ခရီးသွား Destination Update ကို • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ
ဧပြီလ 18, 2019
သင်စဉ်းစားတဲ့အခါ ပင်လယ်သေသင်ကုန်တိုက်တစ်ခုကိုစဉ်းစားသလား ဇိမ်ခံစတိုးဆိုင်များ၊ ရေခဲမုန့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်၊ ကဖေးများနှင့်စပါးပင်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
ဆားငန်ရေ၏တောင်ဘက်အဆုံးရှိလမ်းဘေးနှင့်ပင်လယ်ကမ်းခြေပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးပင်လယ်သေတွင်လှပသောကုန်တိုက်သစ်တစ်ခုသည်အစ္စရေးနှင့်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက်ထုတ်ကုန်များကိုတန်ဖိုးမြှင့်အခွန်ထက်လျော့နည်းစွာဖြင့်ရောင်းချသည်။ စျေးနှုန်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုကုန်တိုက်ကြီး၏တည်ဆောက်သူကပေးလိမ့်မည်။ ပြည်ပခရီးသွား items ည့်သည်များအနေဖြင့်ပစ္စည်းအမြောက်အများအပေါ် VAT ပြန်အမ်းငွေကိုရရှိနိုင်သဖြင့်နှစ်ဆလျှော့စျေးကိုတောင်းခံနိုင်သည်။
ပင်လယ်သေသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အနိမ့်ဆုံးနေရာဖြစ်ပြီး Negev သဲကန္တာရ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းကိုဝိုင်းရံထားသည်။ ဆားငန်ရေတွင်ငါးမျှမရှင်သန်နိုင်သောကြောင့်အိုင်၏ဆားငန်ရေသည်ပင်လယ်သေဟုခေါ်သည်။ ပင်လယ်သေ၏ငန်ငန်သောရေ၏အခြားရလဒ်မှာ၎င်း၏ကျော်ကြားသောကျန်းမာရေးနှင့်အနာပျောက်စေသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်၎င်းတို့၌သဘာဝတွင်မျောနေနိုင်သည့်ထူးခြားသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။
ပင်လယ်သေ၏ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်အများပြည်သူပိုင်ကမ်းခြေများစွာရှိသည်။ လူကြိုက်များသောကမ်းခြေများမှာ Ein Gedi သဲသောင်ပြင်နှင့် Ein Bokek အပန်းဖြေစခန်းရှိကမ်းခြေများဖြစ်ပြီးဟိုတယ်တော်တော်များများသည်ကိုယ်ပိုင်ကမ်းခြေများကမ်းလှမ်းထားသည်။
ဘာမှမလုပ်ပါကခရီးသည်များသည်လေအေးပေးစက်ကိုအမြဲတမ်း ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။
ကဖေး ဝန် တောင်းဆိုမှု ပေးရ သေသော ပင်လယ်သေ ကန္တာရ တိုက်ရိုက် လျှော့စျေး နှစ်ဆ မြေကြီးတပြင် အဆုံး entry ကို လက္ခဏာ ကြေး ငါး သွား! အနာရောဂါငြိမ်းစရာ ကျန်းမာခြင်း ICE ရေခဲမုန့် အစ္စရေး ပစ္စည်းများ ရှုခင်း ခဲ နည်းသော ဇိမ်ခံ ကုန်တိုက် နာမတျောကို ကမ်းလှမ်းမှု ရေခြားမြေခြား လူကြိုက်များ စျေးနှုန်းများ ကိုယ်ပိုင် ကုန်ပစ္စည်းများ ဂုဏ်သတ္တိများ သွားရောက်ရာအရပ် ပင်လယ် စျေးဝယ် တောင်ဘက် spa စတိုးဆိုင်များ အသက်ရှင် အခွန် ပင်လယ်သေ ထင် အဘိုး VAT ရေ ရေကို